Saika handroba fiara nitondra volabe…: raikitra ny fifampitifirana, jiolahy roa lavon’ny polisy | NewsMada
Nirefodrefotra ny basy tetsy Ambodimita, omaly tolakandro. Saika handroba fiara iray nitondra volabe ireto jiolahy efatra nitam-piadiana mahery vaika. Lavon’ny balan’ny polisin’ny BC sy Sag, vokatr’izany, ny roa tamin’ireo olon-dratsy, raha azo sambo-belona niaraka tamin’ny basy PA kosa ny iray.
Nisehoana fanafihana nitam-piadiana nahafatesana jiolahy nitam-piadiana miisa roa tetsy Ambodimita, omaly. Fiara mitondra ny marika Kangoo iray handeha hanatitra “versement” niala tetsy 67 ha ny narahin’ny jiolahy niisa efatra. Nanoloana io anefa, nanara-maso ireo olon-dratsy ireo koa ny eo anivon’ny Sag (Service anti-gang) eo anivon’ny Polisim-pirenena. Rehefa tonga teo amin’ny lalana Ambodimita, nanakana avy hatrany ilay fiara narahiny ireo jiolahy nitam-basy ary nikasa haka ny vola tao anaty fiara. Tetsy ankilany, efa tsy lavitra teo ny polisy namandrika azy ireo ka nandray ny andraikiny avy hatrany. Kinanjo, namaly tifitra variraraka ireo jiolahy ary nanohitra ny polisy sy nanao tongotra ankatoka. Niezaka nisambotra ireo olon-dratsy, noho izany, ny Sag ka maty voatifitra ny roa amin’ireo jiolahy raha toa ka azo sambo-belona ny iray. Tafatsoaka kosa ny iray izay voalaza fa nitondra basy Kalachnikov. Marihina fa efa voatifitra io jiolahy iray nandositra io ary nifanenjehan’ny polisy. Nahatrarana basy PA iray niaraka amin’ny bala teo amin’ireo roa voatifitra. Tsy nisy lasa kosa ny vola tao anatin’ilay fiara narahin’ireo andian-jiolahy ireo.
Efa narahi-maso fatratra…
Vantany vao niala teny amin’ny faritr’i 67 ha ny tolakandro, efa nahin’ny polisy ny fihetsika nasehon’ireo olon-dratsy ireo. Nanampy trotraka ny firongatry tsy fandriampahalemana eny amin’iny faritra iny ka nataon’ny Sag andrimaso ireto jiolahy ireo. Ora vitsy taorian’io, tsikaritra fa nanaraka ilay fiara Kangoo izy ireo ary nandrasan’ny polisy kendry tohina teo Ambodimita. Fantatra fa tena jiolahy tokoa izy efatra mirahalahy ireo ary namoaka basy Kalachnikov sy PA iray. Heverina fa isan’ireo jiolahy mpanatontosa fanafihana mitam-piadiana eto an-dRenivohitra ireto andian-jiolahy ireto. Andrasana ny tohin’ny raharaha amin’izao fotoana izao.